बिदेश बाट पैसा पठाउदै हुनुहुन्छ? यस्तो छ आजको रेट.. – Tufan Media News
बिदेश बाट पैसा पठाउदै हुनुहुन्छ? यस्तो छ आजको रेट..
९ मंसिर २०७६, सोमबार १२:१९
काठमाण्डौ – आज सोमबार कतारी र ओमानी रियाल र कोरियन वनको भाउ घटेको छ । दिनारको भाउ बढेको छ ।
सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ०४ पैसा तोकेको छ । हिजो आइतबार पनि डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ०४ पैसा रहेको थियो ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ । हिजो पनि खरिददर ३० रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६८ पैसा थियो ।
आज सोमबार कतारी र ओमानी रियालको भाउ घटेको छ । कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ । खरिददर ३१ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको थियो ।
ओमानी रियाल १ को खरिददर २९७ रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर २९७ रुपैयाँ ८६ पैसा रहेको थियो ।
यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३२ पैसा छ । हिजो पनि खरिददर ३१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको थियो ।
मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर २७ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ५७ पैसा नै रहेको थियो ।
सोमबार कोरियन वनको भाउ घटेको छ भने दिनारको भाउ बढेको छ । कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७५ पैसा पुगेको छ । हिजो खरिददर ९ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको थियो ।
आइतबार कुवेती दिनार १ को खरिददर ३७६ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ३७८ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३७६ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३७८ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको थियो ।
बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०३ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३०५ रुपैयाँ १६पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३०३ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३०५ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको थियो ।